Izindaba - ungakusebenzisa kanjani ukuphakamisa izitsha ezingama-20ft
Namuhla senza ukuthandwa kolwazi, ingxenye ye-Side Loader Trailer
Side Loader Truck siqukethe izingxenye eziningana
1. Ukudonsa ilitha eliseceleni le-trailer, singakhetha ukunikwa amandla yi- (PTO), noma singakhetha ukusebenzisa injini ezimele ukuhlinzeka ngamandla. Lezi zindlela ezimbili zamandla zinika amandla i-crane ohlangothini lwesitsha. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, uma amandla angaxhunyiwe kugandaganda, awakwazi ukusebenza
2. Umfutholuketshezi onamathani angama-37-container ohlangothini lokuphakamisa i-crane. La ma-crane abekwe ezinhlangothini zombili zekhasethi le-lifte chassis, futhi adlulisa izinto ngamasilinda wokubacindezela kanye neshubhu le-hydraulic ukubona umsebenzi wokuphakamisa i-crane.
2. Ukunikezwa kwamandla. Injini kadizili noma injini kadizili efakwe kwi-trailer ye-crane ngayinye ihlinzeka ngomthombo wamandla kuyo yonke imoto naku-crane. Vele, singavame ukubona i-PTO ithwalwa yimoto yethu ukuthatha amandla.
4. Ngemuva kokuthi imoto ihanjiswe endaweni efanelekile, okokulayisha ohlangothini lwenqola yama-trailer kungathwala isisindo sesitsha ngaphezu kwamathani angama-37, kanti isisindo somklamo singaba ngamathani angama-80, kepha ngenxa yesisindo esilinganiselwe sesiqukathi , imvamisa sithi umthamo wesisindo se-chassis ungamathani angama-50, kanye nesisindo se-crane uqobo. Ngaphezu kwalokho, kule modeli, sinemishini yokulawula okukude njengokujwayelekile. Irimothi ine-joystick nezinkinobho. Zimbili izindlela zokuxhuma, enye ukuxhuma ucingo, enye ukuxhuma nezimpawu zomsakazo, ukuze isebenze kalula. Opharetha uhambahamba esitsheni ngesikhathi sokusebenza, okusiza ukusebenza kweloli ukubona indawo yokuphakamisa kusuka ezinhlangothini ezihlukile futhi kunciphise ubukhona bezingozi.
5. Ukuhlinzekwa ukuzinzisa laba bantu ababili abaphuma endaweni ethembekile futhi enzima. Ukuhlonyiswa ngezinyawo ezimbili ze-hydraulic, ungaphakamisa iziqukathi ezinesisindo esifinyelela kumathani angama-37. Yize i-outrigger ingasiza ukulungisa ukuphakama emhlabathini ongalingani, sikholelwa ukuthi kuphephile ukusebenza endaweni eyisicaba, futhi iphinde ithuthukise umkhawulo wokuphepha nomkhawulo wokulayisha lapho kugcinwa iziqukathi.
6. Isitsha lifter chain. Ngesikhathi senqubo yokuphakamisa, amaketanga ama-4 alungiswa ukusuka phezulu kophakamisa ohlangothini aye endaweni ekhiyiwe ezansi kwesitsha. Ungakhetha futhi ukusebenzisa ilokhi yokuxhuma isitsha sangaphandle ukulungisa iziqukathi ezimbili ezinamamitha angu-20. Lapho umsebenzisi eqinisekisa ukuthi iziqukathi ezimbili ezinamamitha angama-20 zikhiyiwe ndawonye futhi azinzile, isilayidi eseceleni singahambisa isitsha njengesitsha esingamamitha angu-40. .
Isikhathi Iposi: Aug-01-2021